Ndezvipi zvigadzirwa zvemari? | Ehupfumi Zvemari
Ehezve, zvigadzirwa zvemari ndeimwe yezvigadzirwa zvakaomesesa izvo varimi vanogona kunyorera kune izvozvi. Hazvishamisi kuti ivo vanozivikanwa nenjodzi mukushanda kwakakwirira kupfuura zvimwe zvigadzirwa zvemari. Neichi chikonzero, haina kukodzera kune ese profiles evadiki nepakati varimi. Kana zvisiri izvo zvinopesana, avo vane zvakawanda ruzivo uye kudzidza mukuita kwako. Zvekuti nenzira iyi, njodzi dzekurasikirwa nechakanaka chikamu chemari yakaiswa mari dzakadzikiswa. Mhedzisiro yemari inogona kutarisirwa seimwe yeakanyanya kusazivikanwa mune yekudyara chikamu.
Kubva pane ino mamiriro ezvinhu, hapana zvirinani pane kuziva zvarinoreva zvechokwadi kuratidza kana zviri nyore kwauri kuti uite irwu rudzi rwekuvhiya kubva panguva dzino chaidzo. Nekuti zvazviri, chinobva mune zvemari chigadzirwa chakanangana nekudyara uye kukosha kwayo kuri pamusoro pe mutengo weimwe mari yemari iyo inowanzo kunzi sosi iri pasi. Mune mamwe mazwi, kana semuenzaniso mafuta anoiswa kune kukosha kweramangwana kwemafuta, tiri kureva kumutengo wegoridhe nhema.
Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti kana chero zvigadzirwa zvemari zvichiratidzwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti chiri chigadzirwa chinoshanduka-shanduka. Izvi mukuita zvinoreva kuti inogona kureva chero hupfumi hwemari hwakakosha munyu, nezvisinei nemipimo maererano nechipo icho misika yezvemari inogona kuburitsa. Ndokunge, kubva kumasheya akasiyana akanyorwa pamisika yemari kusvika kumaindices emasheya, zviyero zvemitero kana zvimwewo zvigadzirwa. Pasina kukanganwa zvinhu kubva pamari yakamisikidzwa. Ndokunge, iwe unenge uine sarudzo zhinji dzaunosarudza kubva uye woita kuti mari ichengetedze zvichienderana nezano rawakagadzira nguva dzese.
1 Mhedzisiro yemari: yavo kuumbwa
2 Zvikwereti zvinobva
3 Iwe unoda here kuziva zvimwe zvigadzirwa?
4 Mari yemari yemari inobhadharwa
5 Pane ese masheya indices
6 Sarudza chinhu chakakodzera
Mhedzisiro yemari: yavo kuumbwa
Iyi kirasi yezvigadzirwa zvemari inosiyaniswa nekuvhurika kumikana mitsva muchikamu chekudyara. Mune ino pfungwa, izvo zvinonzi zvigadzirwa zvichibva zvave kuwedzera kuwanda. Forex Ndivanaani vanopindira mu mari yekutsinhana. Mune mhando iyi yezvigadzirwa zvemari unogona kutora sarudzo dzinoverengeka pamari dzakasiyana. Iyo haifanire kunge iri euro, kure nazvo, asi iwe wakavhurika kumakambani ese epasirese akanyorwa pamisika yepasi rose. Kubva kudhora reUS, Swiss franc, yen yen yeJapan kana kunyangwe krone yeNorway.
Iyo iri fomu chaiyo yezvinhu zvemari zvinosangana neicho chakakosha kudiwa kubva kune vadiki nepakati varimi. Kwete pasina, mari Icho chimwe cheakanyanya kutsanangudza kushanda nemhando iyi yekudyara. Kunyangwe ichigona zvakare kuurayiwa nezvinhu zvakasvibirira, chaiyo simbi kana kunyangwe neyakavimbika zvisungo. Mupfungwa iyi, hapana zviripo zvinorambidzwa zvemhando ipi neipi kuitira kuti ugone kushanda kubva panguva dzino chaidzo. Chero zvazvingaitika, izvo zvauchazoda inhanho yepamusoro yekudzidza mumabasa ako, mushure mezvose, hazvisi zvekutenga nekutengesa zvikamu pamusika wemasheya.
Kune zvekare dzimwe nzira dzakapusa dzekuita izvi zvekudyara uye zvinoendeswa kuburikidza neanonzi mahedheni echikwereti. Ndiyo chaiyo njodzi yekuti a chikwereti kana voucher uye izvo zvakave nekukosha kwakakosha mukati memakore ekutanga edambudziko rehupfumi. Iko varimari vakakwanisa kuita kuti mashandiro avo aite purofiti nemakwiriro epamusoro epakati kupfuura kuburikidza nezvimwe zvakajairika zviwanikwa zvemari. Kunyangwe kune rimwe divi njodzi dzekutora chinzvimbo mune izvi zvigadzirwa dzakakwirira zvakanyanya. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kusiya akawanda euros munzira kana shanduko yadzo isiri iyo chaizvo zvawanga uchitarisira kubva pakutanga.
Kubva pane yakajairika mamiriro, iwe unofanirwa zvakare kuudza kuti iwo zvigadzirwa zvemari zvisina kunangana nechero investor chimiro. Kwete zvakanyanya kushoma, nekuti chete avo vakajaira rudzi urwu rwekuita ndivo vanozogona monetize zvako wega zvinhu kana mhuri. Izvi hazvifanirwe kukanganikwa kuitira kuti iwe usawane kushamisika kusingafadzi mumazuva mashoma anotevera, uye sezvazvakaitika kune vamwe vako vakaisa mari muchigadzirwa ichi chemari vasingazive kuti chaive chii chaizvo. Uye mhedzisiro yacho haigone kuve yakaipisisa kubva kunhoroondo yekuona kwemaitirwo.
Iwe unoda here kuziva zvimwe zvigadzirwa?
Ehezve, kana izvo zvaunoda chiri kushamisika kusanzwisisika kuita yako investments nezvikwereti zvemari, hauzove nematambudziko akawandisa. Nekuti zvirokwazvo, iwe unogona zvakare kuwana zvimwe zvigadzirwa zvichibatsira uye zvine hunyanzvi seizvo zvinotorwa kubva kuCO2 choutsi, inflation zvigadzirwa, nezvimwe. Kunyangwe zvingaite sezvisingaite, unogona kuita mari neiyi dzimwe nzira dzekudyara. Kunyangwe senge muzviitiko zvakapfuura nedosi inozivikanwa yenjodzi mukushanda. Hazvishamise kuti ivo havana kuitirwa zvakajairika vanhuwo zvavo.
Kune rimwe divi, kune zvekare varipo mune iri bhizinesi mukana iro rinonzi Zvigadzirwa. Idzo ndidzo sarudzo pazvinhu zvakagadzirwa, senge mafuta kana goridhe, pakati pezvimwe zvakakosha. Iko, kumwe kunonyanya kuzivikanwa kunomiririrwa nesarudzo, ramangwana kana kuzvitendera pachavo. Ehezve, iri imwe nzira yekutarisana nenyika yeinvestment uye kuti irimo mune zvinopihwa zvakagadziriswa mumakore apfuura, ese mabhanga nemapuratifomu emari.
Mari yemari yemari inobhadharwa
Chimwe chiitiko chekutarisa ndechekureva kumutengo wemabasa aya mumisika yemari. Zvakanaka, mune iyi pfungwa misiyano haina kunyanyisa kuremekedza kune zvimwe zvakajairika zvigadzirwa zvemari. Kunyangwe zvese zvichizoenderana ne akasarudzwa mari yemari nemushandisi. Mari yavo inenge iri pakati nepakati pakati pekutenga kana kutengesa masheya pamusika wemasheya pamwe nekudyidzana mari. Kunyangwe hazvo zvinhu zvakaomesesa zvichipa mitengo iri kudiwa zvakanyanya nekuda kwekunanga misika yepasi rose uko mashandiro anofanira kubhadharwa mune imwe mari isiri iyo euro.
Chero zvazvingaitika, haugone kukanganwa kuti kiyi yekutsvagisa ichi chigadzirwa chemari iri muchokwadi chekuti zvakafanira kuziva mukati unoisa kupi mari yacho. Chimwe chinhu icho vatengesi vese vasina kujaira uye icho chinokonzeresa kuti mhedzisiro isazove izvo zvinonyatsotarisirwa mune chero mhando yeruzivo nzira yekudyara. Kupfuura dzimwe nzira dzehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa. Icho chinhu iwe chaunofanirwa kuve nacho kubva ikozvino zvichienda mberi kana iwe usiri kuda zvisingatarisirwi kushamisika.
Pane ese masheya indices
Nekudaro, hazvisi zvese zvigadzirwa zvemari zvakaenzana zvakaomarara. Hongu kwete uye mupfungwa iyi une huwandu hwakawanda hweaya mamodheru ekudyara. Ivo vanobva kunzvimbo dzakatorwa mune mamwe mabhuruu machipisi emunyika equities, senge Endesa, BBVA, Repsol kana Banco Santander kune ramangwana sarudzo yechiratidzo chechiratidzo, iyo Ibex 35. Pasina kuregeredza makore gumi emabond pamusika senzira inochengetedza yekuita kuti kuchengetedza kunobatsira nenzira yakaenzana.
Dzimwe mari dzisinganyanyo kuzivikanwa dziripo, senge sarudzo pane Ibex 35. Chero zvazvingaitika, aya mafomati akaomarara anoda kunzwisisa kukuru kwechigadzirwa chemari ichi. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti haisi yemhando yakafanana, kana zvisiri, zvinopesana, ine mashandisirwo akasiyana uye ehunhu hwakasiyana, sezvaungave iwe waona mune ino chinyorwa. Naizvozvo, iwe unofanirwa kuve wakajeka kwazvo kuti ndeupi wavo wauchazotarisa kubva zvino zvichienda mberi.
Sarudza chinhu chakakodzera
Kune rimwe divi, imwe yemakiyi ekuita purofiti kusarudza iyo mari yezvemari kwaunoda kuisa mari yako zvakanaka. Kunyanya kana iwe wakamboshanda nayo sezvo chiito ichi chicharerutsa iro basa nenzira inoshamisa kwazvo. Pasina kuyedza mune ino pfungwa sezvo chinhu chega chaunogona kuwana ndicho kushamisika kushamisika kwakanyanya kusarudzika kupfuura zvakajairwa. Ichi chigadzirwa isina kugadzirirwa kuyedza naye, asi zvinopesana kuva nezvinhu zvakajeka kubva pakutanga. Icho chinangwa icho iwe chaunofanira kufunga nezvacho mukugadzira chero nzira yekudyara.
Kana iwe ukatevedzera izvi zviri nyore zvinodiwa, iwe unenge uine yakawanda ivhu rakawanikwa uye padhuze nepo iwe kwaunogona kuwana imwe capital capital mune mashandiro anoitwa kuburikidza nemhedzisiro yemari. Nekuti zviri kumagumo ezuva izvo zvazviri, kunyangwe kana iri kuburikidza nechinhu chakagadzirwa seichi. Hazvishamise kuti neimwe nzira haina chekuita nekutenga nekutengesa kwemasheya mumisika yemasheya. Inopa mimwe misiyano inoonekwa zvakanyanya uye yaunofanirwa kutarisira kana uchihaya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chii chinobva mune zvemari?
Kuongorora kwekudyara: kupi?